कोरोना कहर र हामी जनता - सिम्रिक खबर
कोरोना कहर र हामी जनता
जेठ ३१, काठमाडौं । सामाजिक संजालबाट सुरु भएको Enough is Enough आज देशभरिका सडकहरुमा छताछुल्ल देखिन्छ। देशको वर्तमान अवस्था विरूद्ध युवाहरु एकिकृत हुनु राम्रो कुरा हो तर समय उचित भने पक्कै होइन्। यि सडकमा देखिएको राष्ट्रप्रेम अहिले विश्व महामरीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना विरुद्ध लागेको भए सायद अहिले देशमा कोरोनाको अवस्था केही हदसम्म सुधार्न सकिन्थ्यो।
सामाजिक संजालमा भएका हजारौं पेज र ग्रुपहरुबाट धेरै कामहरु भएको देखिन्छ , अब ति पेज र ग्रुपहरुले देशको स्वास्थ्य अवस्थालाई केही सहयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ। धेरै त नसकिएला, तर अहिलेको अवस्थामा कोरोना परिक्षण गर्ने किट र मेसिन किनेर देशभरका करिव ४ हजार माइक्रोबायोलोजिस्टहरुलाई परिचालन गर्ने हो भने पनि कोरोनाको परिक्षण केही हदसम्म चाडो होला। सामाजिक संजालबाट लाखौं रकम उठाएर समाजसेवा गर्ने हामी युवाशक्ति यो सकारात्मक बिषयमा पनि सोच्ने गरौँ। आफु बसेको ठाउँमा जनचेतनामूलक सन्देश होस या स्वयम्सेवक भएर होस हामी केहि न केहि रुपमा सहयोग अवस्य गर्न सक्छौं। हजारौंको भिड जम्मा भएर प्रदर्शन गर्ने यो उचित समय हुदै होइन्। त्यो भिडमा एक जना मात्रै कोरोनाको बिरामी आएमा भोलि देशको अवस्था के होला त्यतातिर नि ध्यान दिऊ। यो कोरोना रोकथामको जिम्मा सरकारको मात्रै पक्कै होइन , हामो नि त्यतिकै जिम्मेवारी छ तर हामी सर्वसाधारण जनता यो कुरामा चुकेका छौ।
लेखक दिपक सन्ज्याल
अहिलेको अवस्थामा कोरोनाको कारणले भन्दा नि मानिसहरु भोकले धेरै मरेका छन्। हामी सरकारको जस्तो अर्बको राहत त बाड्न नसकौला तर आफ्नो टोल/वडामा रहेका विपन्न परिवारलाई दुई छाक खाना खुवाउन त सक्छौँ नि ? त्यतातिर आजसम्म यि देशभक्ति युवाशक्तिले किन सोच्न भ्याएनन् ? यो महामरीमा हामी सबै मिलेर किन महाअभियान नचलाउने ? सामाजिक संजालमा राष्ट्रप्रेम देखाएर न त देशको कल्याण हुन्छ न त जनताको। हामी अधिकारको लागि लडिरहदा कहीँकतै कर्तव्य बिर्सौ जस्तो लागिरहेको छ। पहिले कोरोना रोकथाममा लागेर देश र जनता बचाउ अनि भष्ट सरकार र यिनका भरौटेहरुलाई झाडुपुछा लगाएर सफा गरौला।